ती ओली, यी देउवा – RaptiSandesh
Home / Feature Breaking news / ती ओली, यी देउवा
‘प्रकृतिका हरेक प्राणीहरू अद्वितीय हुने भएकाले एकसँग अर्कोको तुलना गर्नु उचित हुँदैन ।’ यो भनाइ हो पूर्व राजा वीरेन्द्रको । पूर्वप्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवालले आफ्नो आत्म संस्मरणमा वीरेन्द्रको यो भनाइसहितको प्रसङ्ग उल्लेख गरेका छन् ।
प्रकृति फरक छ । बगैंचामा रहेका फूलहरू एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैनन् । उनीहरू केबल फुल्छन् मात्र । तर सर्वश्रेष्ठ प्राणी जिकिर गर्ने मान्छेले भने फरक स्वभावको विकास र अभ्यास गर्दै आइरहेको छ । पूर्वराजा वीरेन्द्रले तुलना गर्नुलाई जायज नभने पनि हाम्रो समाजमा यस्ता तुलना भइरहेका हुन्छन् ।
केपी शर्मा ओली सरकारबाट बाहिरिएसँगै नयाँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको सत्तारोहण भएको छ । सामाजिक सञ्जालहरूमा ओली र देउवाको तुलना हुन थालेको छ । यो क्रम यसअघि पनि चलिरहेकै थियो ।
जतिबेला ओलीका विभिन्न क्रियाकलापहरुको प्रारम्भिक टिप्पणी गर्दै कतिपयले उनलाई ‘भष्मासुर प्रवृत्ति’को संज्ञा दिइरहेका थिए, त्यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा देउवा संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा भागबण्डा खोजिरहेका थिए । केही समय अगाडिसम्म ओली र देउवा सँगसँगै थिए । संसद र सडकमा नभेटिने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता बालुवाटारतिर भेटिन्थे ।
जब ओली ‘धेरै नै’ अगाडि बढ्दै गए, तब देउवा हच्किए । नेकपाको विभाजन र एमालेभित्रको विवादले ओली बालुवाटारदेखि बालकोटसम्मको यात्रा गर्न बाध्य भएपछि देउवा अहिले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा उक्लिएका छन् । योसँगै प्रतिपक्षी देउवा सत्ता पक्ष बनेका छन् र सत्तापक्ष ओली प्रतिपक्षी शक्ति बनेका छन् ।
देउवाले प्रतिपक्षी हुँदा कस्तो राजनीतिक व्यवहार देखाए र ओली प्रतिपक्षी भएपछि कस्तो राजनीतिक व्यवहार देखाउँछन्, यसको पनि तुलना हुने नै छ । त्यसो त, देउवाको शपथग्रहण समारोहमा अनुपस्थित भएर ओलीले प्रारम्भिक सन्देश दिइसकेका छन् ।
बोल्ने कुरामा ओली ‘खप्पिस’ छन् । लोक प्रचलनका उखान टुक्काहरूको उपयुक्त प्रयोग र प्रभावकारी प्रस्तुतीकरण ओलीका विशेषता हुन् । तर देउवाबाट यसरी मनोरञ्जनात्मक शैलीमा कुराकानी सुन्न पाइने छैन ।
पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलनका क्रममा पाएको यातनाका कारण उनको जिब्रोमा समस्या पनि छ । त्यसैले उनीहरुको बोलीमा समानता छैन । त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा ओली र देउवाका बारेमा विभिन्न बिम्बहरू बनेका छन् ।
कांग्रेस र कम्युनिष्ट
दुवै नेताको बीचमा चिनियाँ पर्खाल नै उभिएको छ विचारधाराको । ओली पाँच दशकभन्दा लामो समयदेखि कम्युनिष्ट आन्दोलनमा सहभागी छन् । त्यो भन्दा लामो समयदेखि देउवा राजनीतिमा संलग्न छन् । प्रजातान्त्रिक विचारधारा उनको आदर्श हो ।
यद्यपि पार्टी र नेता कार्यकर्ताको भीडमा दुवै पार्टीका नेता कार्यकर्ता आचरण र व्यवहारका दृष्टिले छुट्याउन नसकिने गरी मिसिएका छन् । बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवाद मान्ने देउवा र कम्युनिष्ट समाजवादको पक्षपाती ओलीका व्यवहारहरुले भने समाजवाद पछ्याएको मानिंदैन । शिक्षा र स्वास्थ्यकाे निजीकरणमा दुवैको विमति छैन भने उदारवादको शक्तिशाली हावाले दुवैलाई हल्लाइरहेकै छ ।
‘तदर्थवादी’ देउवा, दृढ ओली
व्यक्तिगत व्यवहार नियाल्दा देउवा अलि ‘होस्ल्याङ्गे’ लाग्छन् । योजनावद्ध ढंगले नचल्ने र जे आउँछ, त्यो टर्दै जान्छ भन्ने उनको व्यवहार देखिन्छ । तर, ओलीमा भने मनमा दृढ योजना बनाउने र त्यसलाई गरेरै छाड्छु भन्ने स्वभाव छ ।
जस्तो कि केही समय अगाडिसम्म देउवा विपक्षी गठबन्धन बनाउने सोचमा थिएनन् । कम्युनिष्टहरू फुटेको बेला नयाँ चुनाव गर्दा कांग्रेसलाई फाइदा हुने उनको बुझाइ थियो । पुस ५ गते ओलीले पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अरु कांग्रेसजन ‘प्रतिगमन’ विरुद्ध सडक संघर्ष गरिरहँदा उनी चुनावको तयारी गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिइरहेका भेटिन्थे । तर, उनी केही समयको मिहिनेतमै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगे ।
देउवा र ओली आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासमा कमजोर खेलाडी हुन् । यसको प्रभाव सरकार सञ्चालनमा पनि पर्नेछ । गठबन्धन सरकार चलाइरहेका देउवालाई ओलीलाई जति सुविधा हुनेछैन ।
तर, ओली भने अलि धेरै सुनियोजित योजनामा चलिरहेको घटनाक्रमहरुलाई केलाउँदा निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । पार्टी उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीलाई राष्ट्रपति बनाउने, दोस्रोपटक दोहोर्याउने घटनादेखि सभामुखमा अग्नि सापकोटालाई रोक्ने प्रयाससम्म उनको एउटै उद्देश्यको निरन्तरता पाउन सकिन्छ ।
आन्तरिक लोकतन्त्र : दुवै उस्तै
नेपाली कांग्रेसभित्र देउवाले पार्टीभित्रको लोकतन्त्र अवरुद्ध गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल देउवाले आफू पराजित हुने डरले भ्रातृ संगठनहरुदेखि पार्टीकै महाधिवेशनसम्म रोकिरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । कांग्रेसलाई लोकतन्त्रको पर्यायवाची भनेर अर्थ्याउने गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि शेरबहादुर देउवासम्म आन्तरिक लोकतन्त्रमा कमजोर देखिए ।
एमालेभित्र ओलीका पछिल्ला गतिविधि त्यस्तै छन् । हालसालै बालुवाटारमा बोलाइएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा सहभागी हुन हलतिर हिंडिरहेका ओलीलाई वामदेव गौतम लगायतका नेताहरुले गेटमा लाइनमा बसेर स्वागत गरेको तस्वीर बाहिरिएको थियो । बैठक आफैं चलाउने, प्रस्ताव र निर्णय पनि आफैं सुनाउने ओलीको शैली हेर्दा उनी कस्तो पार्टी बनाउन/चलाउन चाहन्छन् भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ ।
यसरी हेर्दा, देउवा र ओली आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासमा कमजोर खेलाडी हुन् । यसको प्रभाव सरकार सञ्चालनमा पनि पर्नेछ । गठबन्धन सरकार चलाइरहेका देउवालाई ओलीलाई जति सुविधा हुनेछैन ।
देउवा र ओली दुवै लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गरेका नेता हुन् । हिरासतमा देउवाले पाएको यातनाको श्रृङ्खलाहरुको विभिन्न किस्सा नै छन् ।
त्यस्तै, ओली आफू लोकतन्त्रका लागि १४ वर्ष जेल बसेको बारम्बार दोहोर्याउँछन् । दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीबाट बिदा हुँदै गर्दा देशवासीको नाममा गरेको सम्बोधनमा उनले यसबारे पटक–पटक आफ्ना विगत सम्झाउने प्रयास गरे ।
तर, दुवै नेताहरू लोकतन्त्रप्रतिको आफ्नै प्रतिवद्धतामा त्यति इमान्दार देखिएनन् । आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा देउवाले प्रजातन्त्रलाई दरबारमा लगेर बुझाए । ओलीले आफ्नो सत्ता जोगाउन त दुई–दुई पटकसम्म संसद विघटन गरिदिए । ओली लोकतन्त्रप्रति कति प्रतिवद्ध रहे ? यसको जवाफ– दोस्रोपटकको संसद विघटन बदर गर्दा सर्वोच्च अदालतको फैसलामा उल्लेख गरिएकै छन् ।
यसरी हेर्दा दुवै नेताहरू लोकतन्त्रको कुरा गर्न पनि नछाड्ने तर यसको आधारभूत मूल्य मान्यतालाई खासै नपछ्याउने समूहमा पर्छन् । लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्कार विधि र नीतिको समष्टि हो । यी दुवै कुरामा यी दुवै नेताहरू पटक–पटक चुकेका देखिन्छन् ।
सुशासन दुवै नेताको मन्तव्यमा महत्वपूर्ण प्राथमिकतामा पर्छन् । तर व्यवहारले त्यस्तो पुष्टि गर्न सकेको छैन । दुवै नेता यो सवालमा परीक्षित हुन् । दुवै नेताको शासनकालमा केही काण्डहरू जोडिएर आएका छन् । बोली र व्यवहारबीचको अन्तरले दुवै नेताले आफ्नो विश्वसनीयताको ग्राफ घटाएकै छन् । सरकारबाट बाहिरिएका ओलीसँग यो आरोपलाई गलत सावित गर्ने अवसर हाललाई गुमाइसकेका छन् । देउवाले के बोल्छन् भन्दा पनि अब के गर्छन् भन्ने कुराले यी आरोपहरुको जवाफ दिनेछ ।
ओली परिवर्तनका एजेन्डाहरूप्रति अनुदार रहेको आरोप यसबीचमा पटकपटक लाग्यो । उनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरेको व्यवहारबारे एमालेबाट मुख्यमन्त्री भएका नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङ लगायतले आरोप लगाए । समावेशिताको नारालाई एनजिओकर्मीहरूको ट्याउँट्याउँको रुपमा ओलीले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । परिवर्तनका मुद्दाहरुमा ओलीमाथि उनको कार्यकालमा काफी प्रश्न उठेको छ । यो प्रश्नमा देउवा कति फरक देखिन सक्छन् ? जवाफका लागि केही समय कुर्नैपर्छ ।
ओली प्रधानमन्त्री भएपछि लोकतान्त्रिक संस्थाहरू संकुचनमा परेको आरोप लाग्ने गरेको छ । ओलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान जस्ता विभागहरू पनि उनले प्रधानमन्त्री मातहत ल्याए । प्रेसप्रति ओलीको व्यवहार आलोचनायोग्य रह्यो भने यससम्बन्धमा उनले अगाडि सारेको विधेयक विवादमा तानियो । ओलीका पछिल्ला कदमहरूले उनी अधिनायकवादउन्मुख भएको देउवाले टिप्पणी गर्दै आए । अब उनी आफैं कुर्सीमा छन् । उनीमाथि ओलीका ‘गल्तीहरू’ सच्याउने चुनौती छ । उनले गल्ती सच्याउँछन् कि गल्ती थप्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ ।
ओलीको विकल्प देउवा कसरी ?
ओलीको कुर्सीमा देउवा बस्न आउँदा ओलीको उचित विकल्प देउवा कसरी हुन् भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । तर यी दुईमध्ये एक व्यक्ति छनौट वा व्यक्तिप्रतिको पक्षधरताको विषय भने होइन । यो व्यक्ति–व्यक्तिबीचको लडाइँ नै होइन । यसलाई प्रवृत्ति र प्रक्रियाका लागि संघर्षको रुपमा बुझ्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा विधि, पद्धति र प्रक्रियाबाट आउने व्यक्ति स्वीकार्य हुन्छन् । यसरी आउने व्यक्ति मन नपरे व्यक्तिलाई गाली गर्नुभन्दा विधि र पद्धति फेर्न शक्ति लगाउनु उचित हुन्छ ।
यो प्रश्नसँग लोकतन्त्र, संविधानवाद, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण र संसदको पूर्ण कार्यकाल लगायतका प्रश्नहरुसँग जोडिएका छन् । यी सवालमा देउवाले ओलीलाई नै पछ्याए भने उनलाई काँध थाप्नेहरुलाई जवाफ दिन मुश्किल हुनेछ भने देश पुनः उही गोलचक्करमा फस्नेछ । देउवालाई राजनीतिक नैतिकता र संवैधानिक नैतिकता दुवै बचाएर अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती छ । अन्ततः ‘देउवा’ अरु केही हुन नसके पनि ‘ओली’ होइनन् भन्ने पुष्टि गर्न सके पनि नागरिकले अर्को निर्वाचनसम्म ढुक्कसँग कुर्न सक्नेछन् ।
३१ असार २०७८, बिहीबार ०६:५१
Previous: राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारासँग किन ‘एलर्जी’ ?
Next: ‘पार्टी बिग्रनुमा कार्यकर्ताको पनि कम दोष छैन’